Somalia:1-da Luliyo oo laga Xusay Norway & Suudaan + SAWIRRO | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > 10001, Somali Community in Norway, Somali Community in Sudan	> Somalia:1-da Luliyo oo laga Xusay Norway & Suudaan + SAWIRRO
1-da Luliyo oo laga Xusay Norway.
Munaabsad si heer sare loosoo agaasamay oo lugu xusay Maalinta Gobalada Koonfure ee Dalka Soomaaliya ay heleen xuriyadooda lana midoobeen Gobalada waqooyi ee Dalka soomaaliya oo ay soo qaban qabiyeen Ururka Haween Soomaaliyeed ee magaalada Bergen ayaa waxaaa lugu Qabtay Caasimada labaad ee Dalka Norway Bergen.
Munaabsadan ayaaa waxaaa kasoo qeybgalay dhamaaan Qeybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Magaalada Bergen kuwaas oo isugu Jiro Dhlainyaro odayaal,Caruur iyo Dumar intaba.
Xafladan lugu xusay Mubaasabda 1-da Luulyo oo ay dadk inta badan ku lebsinaayeen Calanka Soomaaliya ayaa waxaaa lugu soo bandhigay Heeso, Riwaayado iyo Ciyaaro ka turjmaayo Dhaqan wanaagsan ee Soomaaliyeed.
Dadka Xafladan Kasoo qeybgalay oo ay dhamaantood wejigooda laga dheehan karay farxadda ay u qabaan maalintaaan ay Soomaaliya hanatay xuriyadeeda ayaaa waxey rejo wanaagsan ka muujiyeen xaalada dalka Soomaaliya ayigoo sheegay in ay rejaynayaan in uu nabad noqdo Ayna Sanadka Danbe xafladan oo kale ku qabasan Doonan Magaalada Moqdisho ee xarunta Dalka Soomaaliya.
Guud ahaan dalka Norway ayaaa aad looga xusay munaabsada 1 Luulyo iyadoo lugu qabtay xaflado loogu dabaaldegaayo Munaasabadan.
1-da Luliyo oo Suudaan laga Xusay.
Xaflad aad u ballaaran oo lagu maamuusayay sanadguuradii 51-aad ee ka soo wareegatay markii ay madaxbanaanida qaateen gobolada Koonfureed iyo iskudarsankii Gobolada Waqooyi iyo Koofur ayaa xalay lagu qabtay Magaalada Khartoum ee xarunta dalka Sudan.
Munaasabadaan oo xalay ka dhacday Magaalada Khartuum waxaa kasoo qeybgalay mas,uuliyiin ka kala socotay safaarada Somalida , shirkadaha xawaaladaha, ururada bulshada ,hooyooyin iyo boqolaal ka tirsan ardayda halkaan wax ka barata.
Sii hayaha xilka safiirka safaarada Soomaalida ee magaalada Khartoum Ibraahim Guure Maxamed oo halkaas hadal qiiro iyo xamaasad xambaarsan ka jeediyey ayaa waxa uu ugu horeyn u hambalyeeyey umada Somaaliyeed meelkasta ay joogto isagoo kasoo qeybgalayaashii munaaasabada xuska ah joogeynta usoo gudbiyey fariin hambalyo ah oo ku aadan munaasabadaan oo uu uga siday madaxweynaha dawlada federaalka KMG ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sii hayuhu waxa uu umada Soomaaliyeed alle uga baryey inuu ka saaro dhibka haatan ay ku sugantahay isagoo ugu baaqay dhalinyarada waxbarata in ay isu taagaan sidii umadooda ay wax ugu qaban lahaayeen ayna uga miro dhalin lahaayeen ujeedka Sudan ay u yimaadeen.
Koofurta Suudan: Dad Soomaaliyeed oo dil iyo xarig loogu geystay Libyan conflict:Russia and South Africa to discuss Libya